Isicatshulwa seNaturAntiox Rosemary
Ukuxutywa kweyona nto ibangela ukonakala kokutya kubangela ubumdaka, ukujika kombala, ukutshintsha kwemvakalo kwaye kukhokelele ekunciphiseni kwexabiso lesondlo, iRosemary Extracts inokuthintela ukubola kwe-asidi ye-polyene fatty kunye nokwenziwa kwe-peroxide, kuthintele i-lipid kunye neprotheni kwi-oxidation, ukuze kulawulwe ngokwendalo khupha. I-Geneham Pharmaceutical iphuhlise uluhlu olubanzi lwezicatshulwa ze-rosemary ezikhusela ngokwendalo iimveliso zokutya ngokuchasene ne-oxidation kwaye ke ngoko zandisa ubomi beshelfini; Ezi zicatshulwa zinokusetyenziswa kuluhlu olubanzi lwezicelo kwaye zizezinye iindlela ezisebenzayo kwiikhemikhali antioxidants
Iindidi zeNdalo zePhosphate, ukungqinwa kokusebenza njengesiqhelo i-antioxidants
Ution Isisombululo se-Antioxidant yendalo, ulwandiso lweShelf yoBomi
Temp Ubushushu obuPhezulu obuhlala buhleli ngo-180-240 Pot, ukuSebenza ngokuhambelana kunye nokuSebenza okuphezulu
✓ Ubungqina obuninzi bokusebenza, i-oyile enyibilikayo, inyibilikayo yamanzi / ichithakele
Akukho galelo lonakalisayo kwincasa kunye nombala
I-rosemary isetyenziselwe ukupheka imbali yesicelo seziqholo kumawakawaka eminyaka kumazwe aseYurophu, uphando olunxulumene noko kunye nokusetyenziswa kophando lwe-rosemary kuqala, ukhuseleko lwe-rosemary lubonakaliswe ngokupheleleyo kwimbali ende. Kwiminyaka yakutshanje, izinto eziphambili ze-rosemary ziye zafundwa ngokubanzi kumazwe aseYurophu naseMerika, kuye kwafakazelwa ukuba i-rosemary ine-resistance oxidation ebonakalayo kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yezinto eziphilayo. Benza umgangatho we-rosemary ucaciso, kwaye benze i-rosemary ibonwa njengesizukulwana sesithathu sezongezo zokutya eziluhlaza kwilizwe jikelele.
1. Ukusebenza ngokuqinileyo kwe-antioxidant
Isicatshulwa seRosemary sinokuthintela ukubola kwe-asidi ye-polyene fatty kunye nokwenziwa kwe-peroxide, kuthintele i-lipid kunye neprotheni kwi-oxidation. Inama-1 ~ 6 amaxesha aphezulu okusebenza kunaleyo ye-antioxidant eyenziweyo, njenge-BHA kunye ne-BHT kwiimveliso zeoyile, nangokuphumelela okungcono kune-VE kunye ne-TBHQ kwezinye ioyile.
2. Umsebenzi we-Antibacterial
Isicatshulwa seRosemary sinokuthintela ukusabela kwetyhefu okubangelwa yi-aflatoxin B1, kunye namandla okulwa ne-antibacterial ngokuchasene ne-staphylococcus aureus, escherichia coli, igwele likaNicholson njlnjl. , Ad ekugqibeleni ichaphazele iproteni ye-metabolism
IGeneham iphuhlise uluhlu olubanzi lweNaturAntiox ® iRosemary Extracts yesicelo esahlukileyo kunye nabathengi, iinkcukacha ezichaziweyo ngolu hlobo lulandelayo olucwangciswe zizicelo.
NaturAntio® OS kunye neDOS izicatshulwa zisebenza ngokukodwa kwiimveliso zokutya ezinomxholo ophezulu weoli kunye / okanye zichaphazeleka kakhulu kwi-oxidation enamafutha. Izicelo ezahlukeneyo, sivelise iintlobo ezi-3 ze-oyile enyibilikayo, kubandakanya umgubo, ulwelo kunye nokusasazeka kwamanzi. Ukucaciswa kwe-OS kuhlala kunye nevumba elincinci le-rosemary kunye nombala oluhlaza ocacileyo, ngelixa iinkcukacha ze-DOS ziphuhliswe ngokukodwa kubathengi baneemfuno zoMbala kunye ne-Odor
✓ Ukungqinelani kwendalo kunye nokuSebenza okuPhezulu
Temp Ubushushu High Luhlala 180-240 ℃
Powder & Ulwelo (yenethiwekhi elicwangcisiweyo)
Ext Ulwandiso loBomi beShelf yendalo kunye nelebheli ecocekileyo
✓ Isiphene kunye neColorole ekhoyo
I-NaturAntiox ® WS izicatshulwa zisebenza ngokukodwa kwisiselo, i-emulsions, kwaye ngakumbi ngakumbi kwiimveliso zokutya ezinomxholo ophantsi weoli. Siye savelisa isicatshulwa esinyibilikayo samanzi kwiindawo ezahlukeneyo kwifom yomgubo
✓ Amanzi anyibilikayo enezinto ezahlukeneyo
Label ekhuselekileyo necocekileyo
I-NaturAntiox ® CM Unokudityaniswa ngokukodwa zizithako ezenziwe kunye nezicatshulwa zerosemary ukuhlangabezana neemfuno zabathengi; omabini amacandelo asebenzayo (i-herbal kunye / okanye i-antioxidants yemveli) kunye nezinto eziphetheyo ziyafumaneka kuphuhliso lwefomula.
Ii-Antioxidants ezenziwe ngokwezifiso
Ukusebenza ngokuhambelana kunye nokuPhezulu
Uluhlu olubanzi lwezicelo
Ulwandiso loBomi beShelf
Iinkcukacha ezihlelwe ziZicelo
Ukuchazwa okuchazwe ngezithako
I-NaturAntiox ® iRosemary Extracts inokukhusela iimveliso zokutya ezi
uvakalelo kwi-oxidation ebangelwa bubushushu, ukukhanya okanye iipro-oxidant compounds
Ngexesha lokulungisa kunye nokugcina, banokuthintela ubumnandi, incasa
ukuthotywa kunye nokuphela kombala
Ukuqina kwe-oxidative kunye nokuphela kombala kuhlala kwenzeka ngexesha lenkqubo kunye nokusasazwa kwenyama kunye nemveliso yenyama entsha; Oku kuya kubangela i-lipid kunye neprotheni ukuthotywa, ukunambitheka kunye nokulahleka kwephunga. Ke ngoko, ukuthintela inyama kwi-metamorphism, kubalulekile ukuthintela amafutha kwi-oxidation. Ngaphandle kwamanyathelo omzimba njengokupakisha okungafunekiyo kulungiso lwenyama kunye nokusasazwa, i-antioxidant ekhuselekileyo nesebenzayo inokuba yeyona ndlela ilungileyo yokugcina i-oxidation. Sincoma iNaturAntio® OS kunye ne-DOS kwezi zicelo
Iziphumo zokuvavanywa kwe-antioxidation yeNaturAntiox® OS kunye ne-DOS Rosemary Extract esetyenziswe kwimveliso yenyama
Ngokusebenzisa indlela yeRancimat, sithelekise ifuthe le-antioxidation phakathi kwe-NatureAntiox® Rosemary Extract kunye nezinye i-antioxidants eziqhelekileyo, ngokulinganisa ixesha lokungeniswa kwioyile yeoyile, sinokugqiba ukuba iRosemary yeyona nto inamandla okumelana ne-oxidation. Sincoma iNaturAntiox® OS kunye ne-DOS kwezi zicelo
Ioyile yezilwanyana iya kuvelisa ivumba lokuthamba ukusuka kwi-oxidation kunye nokuqina ngexesha lokugcina, ngakumbi phantsi kobushushu obuphezulu. Sincoma i-NaturAntiox ® DOS ukuthintela i-oksijini yeoyile, ukuze kwandiswe ubomi beshelfini, ikwanokwandisa ukukhuselwa kwezakha mzimba kunye neasidi engafumenanga yeoyile kwioyile
Ukutya kwaselwandle kuchaphazeleka lula ukuba kwenziwe i-oxidized kunezinye iimveliso zenyama yomxholo osisityebi we-acid engafakwanga asidi. Ukuthintela amafutha eentlanzi kwi-oxidation kunye nokwandisa ixesha lokuphila, kunye nokugcina incasa kunye neempawu ezifanayo, ukongezwa kwe-antioxidants yendalo efanelekileyo, ekhuselekileyo kunye nefanelekileyo iya kuba yindlela elungileyo, sicebisa i-NaturAntiox D isicatshulwa se-rosemary yesicelo
Iziphumo zokuvavanywa kwe-antioxidation yeNaturAntiox ®
Isicatshulwa seDOS Rosemary esisetyenziswe kwimveliso yokutya